Hargeysa Oo Laga Hirgelinayo Library Loogu Magac Daray Proffesorkii Ugu Horeeyey Afrika Ee Shahaadada PhD Ka Qaata Jaamacadda Havard | Hubaal Media
Guriga ENG-NEWS Hargeysa Oo Laga Hirgelinayo Library Loogu Magac Daray Proffesorkii Ugu Horeeyey Afrika...
Hargeysa Oo Laga Hirgelinayo Library Loogu Magac Daray Proffesorkii Ugu Horeeyey Afrika Ee Shahaadada PhD Ka Qaata Jaamacadda Havard
DAAWO SAWIRRADA: Wasiirro Xukuumadda Ka Socda Iyo Haldoor Labeenta Bulshada Ka Tirsan Oo Ka qayb Galay Dhagax-dhiga Maktabaddan Oo Loogu Magac Daray Prof. Hussein Tansania Oo U Dhashay Dalkan Somaliland
Wasiirka Wasaarada Waxbarashadda iyo Sayniska Mudne Yaasiin X. Maxamuud Xiir faratoon iyo wefti uu hogaaminayo oo ay ka mid ahaayeen Wasiir kuxigeenka wasaarada waxbarasha Mudane Cabdulqaadir Maxamuud Sheekh Muxumed, Wasiirka Maaliyada Mudane Yuusuf Maxamed Cabdi iyo gudida horumarinta xaafada maxamuud haybe ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay maktabad (library) ay yeelan doonto xafdaasi, kaasi oo laga dhisi doono xayndaabka dhulka ku hareeraysan dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali, dhulkaasi oo ahaa keydka dugsiga ayaa laga yagleeli doonaa rug akhris iyo qoraalba ah taasi oo bulshada aqoonteeda wax badan ku soo kordhin doonta.
Munaasibadan dhagax dhiga ah waxa iyaguna ka soo qayb-galay culimaa’u diinka, waayeelka, aqoon yahanka iyo masuuliyiin kale. Magtabadan ayaa loogu magac daray Xuseen Aadan (Tansaani) oo isagu lahaa hindisaha dhismaha magtabadan, nasiib dararo tii illaahay ayaa heshay oo wuu geeriyooday ka hor intii aanu hirgalin dhismaha rugtan akhriska, waxana halkaa ka sii anba qaaday himiladaa marxuumka gudida horumarinta ee xaafada maxamuud haybe taasi oo uu gudoomiye ka yahay Mudane Khadar Suldaan Aadan. Dhanka kale wasaarada waxbarashadda iyo sayniska ayaa ugu deeqday dhulka laga dhisi doono magtabadan, sidoo kale waxay wasaaradu sida ay sheegeen wax ku dari doontaa kharashka ku baxaya dhismaha magtabada iyo qalabaynteedaba.
Ugu horeyn waxa munaasibadaasi ka hadalay Gudoomiyaha gudida horumarinta degmada maxamuud haybe Mudane Khadar Suldaan Aadan, waxaanu ka xog-waramay sidii ay ku timi hindisaha magtabadani waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; anaga oo gudi ahaan ka fakarayna sidii aan bulshadayada wax ugu qaban lahayn iyo sidii aan ugu soo dhaweyn lahayn adeegyada bulshadu u baahan tahay ayaan garawsanay in ay lagama maarmaan tahay in degmadu hesho goob wax lagu akhristo oo aqoonta dhalinta iyo bulshadaba lagu kobciyo, sidaa darteed waxan fikirkaa ula tagnay Dr Xuseen Aadan (Tansaani) oo wakhtiyadaa ka yimi dhanka qurbaha, runtii aad buu ugu riyaaqay arrintaa, waxaanu nala qaatay in uu isagu dhismaha maktabadaa kharashkeeda bixin doono, isla markaana uu bixin doono marka uu soo laabto, laakiin hedii baa heshay oo wuu xijaabtay, rabi godka ha u nuuree. Halkaa kaga maanu hadhin fikirkayagiiye anaga oo kaashanayna aqoon yahahanka iyo culimada degmada ayaan bilawnay dardar lagu aloosayo dhismaha magtabadaa, waxana arrintaa wax weyn nagala qabtay wasaarada waxbarashada iyo madaxdeeda.
Waxa isaguna munaasibadaasi hadalo ka soo jeediyey Mudane Jaamac Muuse Jaamac oo ka mid ah aqoon yahanka u dhaqdhaqaaqa horumarinta hidaha iyo dhaqanka suuban reer Somaliland iyo dhiirigalinta akhriska iyo qoraalka, waxaanu ku dheeraaday taariikhda Marxuum Dr Xuseen Aadan (Tansaani) iyo sida loogu baahan yahay in dhan looga soo wada jeesto dhismaha magtabadan, isaga oo arrimahaa ka hadalayana waxa uu yidhi; runtii Dr Xuseen Aadan (Tansaani) waxa uu ahaa maktabad soconaysa, waxaanu wax badan ka soo qayb-qaatay kobcinta iyo kor u qaadka aqoonta bulshada, sidaa darteed waxa uu mudan yahay in la hirgaliyo fikirkii uu ku doonayey in uu dhiso magtabadan. Aniga waxa ii ahaa macalinkaygii, waxbadana waan ka bartay, waana sababta aan maanta munaasibadan uga soo qayb-galay si aan u muuneeyo karaamadii iyo abaalka aan u hayo, sidaa darteed waa in aan dhan uga soo wada jeesanaa dhismaha iyo hirgalinta magtabadan oo waxbadan ka tari doonta aqoonta dalkeena.
Sheekh maxamed Cali Geedi oo ka mid ah culimada waaweyn ee jamhuuriyada Somaliland ayaa isaguna munaasibadaasi ka hadalay waxaanu ku dheeraaday muhiimada balaadhan ee magtabadani u yeelan doonto guud ahaan bulshada reer Somaliland iyo sida loogu baahan yahay in laga wada qayb-qaato dhismaheeda iyo qalabaynteedaba. Dhanka kale sheekh maxamed waxa uu halkaasi ka balan qaaday in uu magtabadan ku caawin doono dhammaan kutubta dhanka diiniga ah, sidoo kale waxa uu sheekhu baaq u diray ganacsatada iyo aqoon yahanka dalka sidii ay uga qayb-qaadan lahaayeen yagleelka iyo hirgalinta magtabadan.
Wasiir Kuxigeenka Wasaarada waxbarashadda iyo sayniska Mudane Cabdulqaadir Maxamuud Sheekh Muxumed ayaa isaguna hadalo kooban oo uu ku guubaabinayo dhismaha magtabadan ka soo jeediyey munaasibadan, waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta goob joog u ahaado dhagax dhiga magtabadan aan ugu magac darnay Marxuum Dr Xuseen Tansaani oo ahaa aqoon yahankii iyo hal-doorkii ummada reer Somaliland kaasi oo wax badan ka soo qabtay dhanka waxbarashadda sidaa darteed waxan bulshada dhammaantood u soo jeedinayaa in ay ka qayb-qaataan dhismaha magtabadan.
Wasiirka Horumarinta Maaliyada Mudane Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa isaguna halkaa ka soo jeediyey hadalo kooban oo ku wajahan dhagax dhiga magtabadan, waxaanu xusay in baahi weyn ay u qabeen bulshada deegaanadani rug ay aqoontooda ku kobciyaan oo ay kaga mashquulaan mukhadaraadka iyo wakhti lumiska. Dhanka kale waxa uu wasiirku sheegay in wasaarad ahaan iyo siyaasada qarankuba ku wajahan tahay sidii bulshada aqoonteeda kor loogu qaadi lahaa, waxana taasi daliil u ah buu yidhi sida ay miisaaniyada ugu kordhiyeen wasaarada waxbarashadda iyo sayniska.
Ugu danbayn wasiirka wasaardda waxbarashada mudane Yaasiin X. Maxamuud Xiir Faratoon ayaa munaasibadaasi soo af-meeray waxaanu halkaa ka soo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay, waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; Xuseen aniga waxa uu ii ahaa macalinkaygii, waxaanan ku tilmaami karaa in uu ahaa jaamac wax badan laga baran karo sidii uu noloshiisa ugu huray horumarinta iyo kor u qaadka aqoonta ummadiisa, sidaa darteed waxan garawsanay in aan magtabadan ugu magac darno, isla markaana aan wasaarad ahaan ugu deeqno dhulka laga dhisi doono magtabadan oo ku yaala xaafada maxamuud haybe gaar ahaan dhulka keydka u ahaa dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali. Magtabadani waxay ku soo kordhin doontaa bulshada ku dhaqan xaafadan iyo guud ahaan magaalada hargaysaba in aqoonta dadka kor u qaado, sidaa darteed waxan ka qayb-qaadanaynaa wax kasta oo lagu hirgalinayo dhismaha magtabadan.
Article horeFadhigii Golaha Wakiillada Ee Shalay Oo Hal Dabo La’ Kalsooni Ku Siiyey Guddoomiyaha Cusub Ee Bangiga Dhexe Ee JSL
Article soo socdaWasiirka Horumarinta Jidadku oo soo Bandhigay Waxqabadka Wasaaraddiisa ee 120kii Maalmood ee U Dembeeyey